दु:खद खबर ! मलेसियामा को’रोना बाटै नबिन तामाङको मृ’त्यु !
क्वालालम्पुर : दिनेश खड्का खप्तडि, मलेसियामा एक नेपालीको मृ’त्यु भएको छ । ईलामको सुर्याेदय ३ घर भई मलेसियाको नेगरी सेम्विलानमा रहेको प्ला’ष्टिकको सामाग्रि
वन्ने यामाखो प्रो’सेसिग कम्पनीमा कार्यरत ३४ वर्षिय नविन तामाङको मृ’त्यु भएको हो ।नविनमा पन्ध्र’दिनभन्दा अगाडि को’रोना सक्र’मण देखिएको थियो । स’क्रमण देखिएपछि उनी पन्ध्र दिन सम्म निलाईमा क्वारे’न्टाईनमा वसेका थिए ।
पुरै सन्चो जस्तै भएर पुन शाहआलम होस्टलमा फर्किएर आएका थिए । कम्पनीमा दुईदिन काम समेत गरेका थिए । यसैविचमा उनको नि’धन भएको हो ।नविन सोहि कम्पनीमा करीव वाह्र वर्षदेखि कार्यरत हुन । पछिल्लो पटक भने करीव चार वर्ष अगाडि घर विदामा आएर पुन फर्किएका थिए ।
कम्पनी राम्रो भएको कारण अनिलले आफनो भाई अनिस तामाङलाई पनि सोहि कम्पनीमा झिकाएर सगै काम गरेका थिए । दाजुको मृत्युको वारेमा केहि भन्न नसकिने भाई अनिसले वताए भने ।
दाजुमा पहिला कोरो’ना पो’जेटिभ देखियो क्वारे’न्टाईनमा वसेर पनि आउनुभयो । फर्केर आएको दुईदिनमै यस्तो भयो । यो कसरी यस्तो हुन गयो म सोच्न पनि सक्दिन अनिसले टेलिफोनमा भने ।
घर फर्कने प्रकृया चलिरहेको थियो सगै आउने कुरा पनि गरिरहेका थिए तर अनिलको यस्तो अवस्था भयो । अर्काे भाई मिल्यो भने यहि सोमवार नेपाल फर्कदैछ नेपालमा रहेका दाईले टेलिफोनमा भने । -रास्ट्र डेली बाट
२०७८ श्रावण २८, बिहीबार १४:५० गते 1 Minute 706 Views